By Nigma4August 2018
Xiaomi ဟာ Laptop မော်ဒယ် အသစ် ၂ မျိုးကို တရုတ်နိုင်ငံမှာ သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့က မိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Mi Notebook Pro2ဟာ မနှစ်က စက်တင်ဘာလလောက်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Mi Notebook Pro ရဲ့ မော်ဒယ်အသစ်ဖြစ်ပြီး၊ Mi Gaming Laptop ကတော့ ယခုနှစ် မတ်လကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ မော်ဒယ်ကို Upgrade ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူစိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံးဖြစ်ပေမယ့် Mi Notebook Pro2က စပြောရမယ်ဆိုရင် အရင် Mi Notebook Pro တုန်းက ၁၅.၆ လက်မအရွယ် FullHD IPS LCD Display ကိုပဲ ပြန်လည်အသုံးပြုထားပါတယ်။ Processor ကိုတော့ အရင် Intel Core i7-7700HQ ကနေ Intel Core i7-8750H Coffee Lake Processor ကို ပြောင်းသုံးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီအတွက်ကြောင့် Mi Notebook Pro2ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ အရင်မော်ဒယ်ထက် ၃၁ ဒဿမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းလောက် တိုးတက်လာဖို့ ရှိပါတယ်။ 16GB ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး၊ 256GB PCIe SSD နဲ့ 1TB HDD တို့လည်း ပါဝင်မှာပါ။ GPU ကို Nvidia ရဲ့ GeForce GTX 1060 ကို အသုံးပြုပေးထားပြီး၊ GTX 1050 Ti MaxQ နဲ့ လိုချင်လည်း ရပါတယ်။
Mi Notebook Pro2မှာ 3W စပီကာ ၂ လုံးကို တပ်ဆင်အသုံးပြုထားပြီး၊ Hi-Res Audio နဲ့ Dolby Atmos တို့ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ချိတ်ဆက်မှု အပိုင်းအနေနဲ့ USB 3.0 သုံးပေါက်၊ USB Type-C တပေါက်၊ 3.5mm နားကြပ်ပေါက်တခု၊ Gigabit Ethernet နဲ့ HDMI 2.0 အပေါက်တို့ ပါရှိမှာပါ။ Dual-band Wifi 802.11ac နဲ့ Bluetooth v4.1 တို့လည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Keyboard ကလည်း အရင်မော်ဒယ်အတိုင်း အောက်ခံမီးလင်းတဲ့ ကီးဘုတ်နဲ့ပဲဖြစ်ပြီး၊ Color Zone ၄ နေရာ ပါရှိမှာပါ။ Mi Notebook Pro2မှာ 3+2 ကြေးနီပိုက်အသုံးပြု အအေးခံစနစ် ပါဝင်လာမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Windows Hello စနစ် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ လက်ဗွေရာ Sensor ၊ UHS-II ကတ်အပေါက်၊ ၆ လက်မအရွယ် ဖန်သား Trackpad နဲ့ အားအမြန်သွင်း စနစ်သုံးနိုင်တဲ့ ၆၀ ဝပ်အား ဘက်ထရီတို့နဲ့ ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Operating System ကတော့ Windows 10 Home နဲ့ပဲ ဖြစ်ပြီး၊ Office 2016 ပါ တပါတည်း ပါဝင်လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ Mi Notebook Pro2ကို အောက်ပါ Specifications အလိုက် ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
 Intel Core i7-8750H, 16GB of DDR4 2666 MHz RAM, GTX 1060 6GB, 256GB SSD PCI-e, 1TB hard drive for 8,999 Yuan ( ခန့်မှန်းချေ $1,300).
 Intel Core i7-8750H, 8GB DDR4 2666 MHz RAM, GTX 1050 Ti 4GB, 256GB SSD PCI-e, 1TB hard drive for 7,999 Yuan (ခန့်မှန်းချေ $1,160).
 Intel Core i5-8300H, 8GB DDR4 2666 MHz RAM, GTX 1060 6GB, 256GB PCI-e SSD, 1TB hard drive for 7,499 Yuan (ခန့်မှန်းချေ $1,100).
 Intel Core i5-8300H, 8GB of DDR4 2666 MHz RAM, GTX 1050 Ti 4GB, 256GB SSD PCI-e, 1TB hard drive for 6,699 Yuan (ခန့်မှန်းချေ $975).
 Mi Notebook Pro2ကို တရုတ်ပြည်တွင်းမှာ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က စတင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး၊ တခြားဈေးကွက်တွေကို ဖြန့်ချိမလား ဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
Mi Gaming Laptop မော်ဒယ်အသစ်ကလည်း ၁၅ ဒဿမ ၆ လက်မအရွယ် FullHD Display နဲ့ပဲ ဖြစ်ပြီး၊ ပါဝင်တဲ့ Specs အလိုက် မော်ဒယ်ကွဲ ၄ ခု ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျဉ်း အားဖြင့် Intel Core i5/i7 Processors ၊ 16GB RAM နဲ့ 256GB+1TB HDD တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
Nvidia GTX 1060 ဒါမှမဟုတ် 1050 GPU နှစ်မျိုး ရှိပြီး၊ အလေးချိန် ၂ ဒဿမ ၇ ကီလိုဂရမ်ရှိကာ အထူ ၂၀ ဒဿမ ၉ မီလီမီတာ ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mi Gaming Laptop မှာ အဓိကအဆင့်မြှင့်ထားတာကတော့ အပူထုတ်စနစ်ဖြစ်ပြီး၊ ယခုမော်ဒယ် အသစ်ရဲ့ ဘေးတဖက်တချက်မှာ အပူထွက်ပေါက် ၃ ခုစီနဲ့ အနောက်ဘက်မှာ ၈ ခု တို့ ပါဝင်မှာပါ။
အတွင်းက အပူကူးပိုက်လိုင်းကလည်း အနည်းငယ် ပိုထူသွားပြီး၊ ပန်ကာတွေကလည်း သိသိသာသာ ပိုကြီးလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပန်ကာအတွက် မော်တာတွေကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် အဆင့်မြှင့်ပေးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Ref: Gizmo China, Gizbot
Topics: Mi Gaming Laptop, Mi Notebook Pro 2